I-Bunkhouse e-Rocking Horn Ranch
Riverton, Wyoming, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Sharon
Woza ujabulele i-Bunkhouse e-Rocking Horn Ranch - indlu yesivakashi enekamelo eli-1 elinendawo yokungena yangasese enendawo yokupaka yomnyango wangaphambili.
Sitholakala kalula kuthelawayeka 26, ibanga elifushane ukusuka eRiverton (13 min), Lander (35 min) naseDubois (60 min). Simaphakathi nezwe lase-Wyoming's Wind River, lapho ungathola khona kalula i-Grand Tetons kanye ne-Yellowstone National Parks, Ihlathi Likazwelonke laseShoshone, iminyuziyamu nemibukiso.
Sinikezela ngendlu yezivakashi enekamelo eli-1 elinendawo yokungena yangasese enendawo yokupaka yomnyango wangaphambili, ibhavu eligcwele elinewasha nokomisa, ikhishi eligcwele, indawo yokuhlala ene-TV/Blu-ray/DVD namamuvi amaningi anobungani bomndeni. Sinegumbi lokulala elithokomele elinombhede wendlovukazi kanye nosofa wendlovukazi owengeziwe onomatilasi omusha wegwebu lenkumbulo egumbini lokuhlala.
Izivakashi zikwazi ukufinyelela i-Bunkhouse egcwele kanye nezinsiza, ikhofi elihambisanayo netiye, izinto zokuhlanza izingubo, okomisa umoya, ibhodi loku-ayina/ayina namalineni.
Yonke indlu engaphansi ingeyokusetshenziswa nguwe, kunomnyango ohlukanisa i-bunkhouse nenkundla yethu nendawo yomuntu siqu, esingafinyelela kuyo ukusuka kolunye uhlangothi ngaphandle kokuphazamisa izivakashi zethu.
4.96(54 okushiwo abanye)
I-Fremont County inamapaki amaningi, iminyuziyamu kanye nemibukiso okufanele ihlolwe, njengokuthi, i-Sinks Canyon State Park e-Lander, enohambo olufinyeleleka kalula, isikhungo sezivakashi kanye ne-scenic drive. Ukusuka lapho ungafinyelela i-Shoshone, ihlathi Likazwelonke lokuqala e-US. NgoJulayi, i-Riverton ine-Rendezvous & Balloon Rally edumile lapho amabhaluni ephakama khona eduze kwedolobha. Isayithi elinemibala ongayibona.
My husband Jim and I have a small horse ranch where we train ranch and trail horses and enjoy the beautiful Wind River Country of Wyoming.
Lena ipulazi lamahhashi elisebenzayo, sihlala phezulu, futhi ngokuvamile siseduze uma udinga okuthile kodwa zama ukugcina okuhlangenwe nakho okuyimfihlo kwezivakashi zethu, uma kuthanda. Singakwethula kumahhashi kanye no-Ida imbongolo uma uthanda.
Wamukelekile ukuhambahamba endaweni futhi ujabulele imibono. Ungazulazula emadlelweni angemuva, kodwa sikucela ukuthi ungangeni enkundleni yasendlini, amapeni amahhashi namadlelo aphansi ukuze uphephe. Wavale wonke amasango futhi ngicela ungawaphakeli amahhashi, ngiyabonga.
Lena ipulazi lamahhashi elisebenzayo, sihlala phezulu, futhi ngokuvamile siseduze uma udinga okuthile kodwa zama ukugcina okuhlangenwe nakho okuyimfihlo kwezivakashi zethu, uma kut…
USharon Ungumbungazi ovelele